တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကို မုဒိမ်းကျင့်၊သတ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရသူတွေကို အိန္ဒိယရဲ ပစ်သတ်
တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကို မုဒိမ်းကျင့်၊သတ်ခဲ့တယ်လို...
7 ธ.ค. 2562 - 01:05 น.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ် ပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်မလေးကို မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သံသယတရားခံ လေးယောက်ကို ရဲတွေက ပစ်သတ်လိုက်ပါတယ်။
တရားလက်လွတ် ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်တာတွေက မုဒိမ်းမှုတွေကို ကာကွယ်တဲ့ အဖြေမဟုတ်ဘူးလို့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အဗင်နက်ရှ် ကူးမားက ပြောပါတယ်။
မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခံရတဲ့ အသက် ၂၇ အရွယ် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် အမျိုးသမီးရဲ့ မီးသွေးပြာတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရဲတွေက ဒါကို အရေးမယူပေးဘူးဆိုပြီး လူတွေက ဒေါသထွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မှုခင်းဖြစ်ခဲတဲ့ တိုးဂိတ်နေရာဟာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တို့ ဂူဂဲလ်တို့လို နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိတဲ့ မြို့အစွန်အများနဲ့ နီးပါတယ်။
ဓားစာခံမိန်းကလေး ပျောက်ဆုံးနေချိန်မှာ ရဲတွေက ဘာမှ အရေးမယူပေးဘူးဆိုပြီး သူ့မိသားစုက စွပ်စွဲခဲ့ပြီးနောက် အခု လူသတ်၊မုဒိမ်းမှုအတွက် ရဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၈၀ ကျော်နှစ်တွေကနေ ၁၉၉၀ ကျော်နှစ်တွေအထိ ဖြစ်ခဲ့ မော်ဝါဒီ သူပုန်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အခုလို သတ်ဖြတ်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူက ရဲအုပ် အဖြစ်နဲ့ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အက်ဆစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သံသယရှိသူသုံးယောက်ကို မှုခင်းနေရာဆီ ပြန်ခေါ်သွားတုန်းမှာ အဲဒီလူတွေ ရဲလက်ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ တုန်းက မြို့တော် ဒေလီမှာ ဘတ်စ်ကားပေါ် မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ အမေကလည်း အခု ရဲတွေက ပစ်သတ်လိုက်တာကို ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
"အခုလို အပစ်ပေးလိုက်တာကို ကျွန်မ အရမ်း အရမ်းကို ဝမ်းသာတယ်။ ရဲတွေက အင်မတန် တော်တယ်" လို့ ANI သတင်း အေဂျင်စီကို ပြောပါတယ်။
သံသယရှိသူတွ အသတ်ခံရတဲ့နေရာကို လူတွေ စုဝေးရောက်လာကြ
သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးအတွက် မြို့တော် ဒေလီမှာ ဆုတောင်းပွဲ လုပ်ခဲ့ကြ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်မှာ ရဲ သုံးယောက်လည်း တာဝန်က ခေတ္တရပ်ထားခံရပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေး ပျောက်ဆုံးတာကို မိသားစုက ရဲကို သွားတိုင်တဲ့အခါ ရဲတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် အရေးမယူပေးဘူးဆိုပြီး မိသားစုက စွပ်စွဲခဲ့တဲ့အတွက် အရေးယူခံရတာပါ။
အဲဒီတုန်းက ရဲတွေက ဒီအမျိုးသမီး ချစ်သူနောက် လိုက်သွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း သူ့ဆွေမျိုးတွေက အစိုးရဖွဲ့ပေးထားတဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာ ကောက်မရှင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အစိုး၇က ထုတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ၂၀၁၇ မှာ အိန္ဒိယမှာ မုဒိမ်း ၃၃,၆၅၈ မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ နေ့တိုင်း မုဒိမ်းမှု ၉၂ မှု ပျမ်းမျှ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
อัลบั้มภาพ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကို မုဒိမ်းကျင့်၊သတ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရသူတွေကို အိန္ဒိယရဲ ပစ်သတ်